3 Fomba fananganana votoatin'ny fotoana tena izy mba hampitomboana ny fifamatorana | Martech Zone
Rehefa mieritreritra momba ny fanatontosana ny atiny ny olona dia mieritreritra momba ny angon-drakitra manokana tafiditra ao anatin'ny sahan-kafatra mailaka iray izy ireo. Tsy resaka fotsiny izay ny vinavinanao na ny mpanjifanao dia, momba azy ihany koa izay izy ireo dia. Ny localisation dia fotoana lehibe handefasana varotra. Raha ny marina dia 50% amin'ireo mpanjifa izay mitady eo an-toerana amin'ny finday avo lenta no mitsidika magazay ao anatin'ny iray andro, ary 18% no mitarika amin'ny fividianana
Araka ny infographic nataon'i Microsoft ary VMob, ny fampiasana angon-drakitra tena izy dia mety hitarika amin'ny famoronana atiny hyper-personalized. Ohatra, ny mpivarotra iray izay nampifanaraka ny varotra sy ny hafatra fampiroboroboana ny vanim-potoana amin'ny toetr'andro dia nahitana fitomboana 18%. NewsCred
Karazan'olon-tokana 3 azonao ampidirina hampitomboana ny tahan'ny click-through, ny fiankohofana ary ny fiovam-po amin'ny fomba rehetra mety tsy ho hitanao:
Location - Mamorona doka sy fampiroboroboana miorina amin'ny toeran'ny mpampiasa.
Traffic - Omeo angon-drakitra fifamoivoizana amin'ny fotoana tena izy handehananao ny vinavinanao mankany amin'ny toerana mety indrindra.
Weather - Miaraha miasa amin'ny API toetr'andro mba hampifanaraka ny varotrao amin'ny toetr'andro na ny fanairana toetrandro.
Ny dokam-barotra mavitrika, ny atiny tranokala mavitrika, ny atiny mailaka mavitrika, ny fanairana mailaka ary ny fanairana finday dia azo apetraka avokoa handraisana an'ity angona mora azo ity.
Tags: mampitombo fifamofoanatoeranatoerana apiangona momba ny toeranaMicrosoftatiny manokanaatiny tena izyfifamoivoizanafifamoivoizanaangona momba ny fifamoivoizanavmobWeathertoetr'andro apiantontan'isa momba ny toetr'andro
Fomba ahazoan'ny orinasa mpandraharaha amin'ny Pokémon Go